ललिता निवास प्रकरणमा सुवेदी दम्पत्ति पुसको ठण्डीमै किन पक्राउ परे ? – Patrika Nepal
पुष ८, २०७८ बिहिबार 47
काठमाडौं, ७ पौष । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदीलाई मध्य पुषको ठण्डी पारेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीले पक्राउ गरेको छ । उनीहरुलाई मङ्गलबार साँझ सोल्टीमोडस्थित निवासबाट सीआइबीको टोलीले पक्राउ गरेको हो । ललिता निवास प्रकरण लामो समययता चर्चामा आएपनि सुवेदी अहिले नै आएर किन पक्राउ परे ? चासोको विषय बनेको छ ।
सुवेदी निर्धक्कसँग हिडिरहेका थिए । तर, उनलाई प्रहरीले पक्राऊ गर्न पाइला सारेको थिएन । अचानक अहिले आएर पक्राउ पर्नुमा केही राजनीतिक विषय पनि जोडिएको देखिदैछ ।
ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई पनि मुछिएका छन् । उनीहरुविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरी मुद्दा चलाउननुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन पनि छ । यो प्रकरणमा मुछिएका विजयकुमार गच्छेदारविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । नाम चलेकाहरु यो प्रकरणमा मुछिएका छन् ।
शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीले योजनावद्ध तरिकाले बालुवाटारको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको अनुसन्धानहरुबाट खुलाइएको छ । बालुवाटारको १४ रोपनी जग्गा ढकाल र सुवेदीको नाममा छ । विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गा बेचेको देखाएर दिइएको समेत खुलेको छ । बालुवाटारको जग्गामा मन्त्रिपरिषदको निर्णय गराएर समेत जग्गा हडपिएको भन्दै अनुसन्धानहरु भएका छन् । तर, अख्तियारले त्यतिबेला प्रधानमन्त्री रहेका माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दर्ता नभएपछि अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
Prevदुवै खुट्टा नभएकी जुनाको पेटमा फेरि अर्को बच्चा
Nextअभागी शिशु जसले आफ्नै आमा देख्न पाएन, बच्चा जन्माएपछि आमाको मृ त्यु
पेटकाे बच्चा श्रीमानले मेराे हाेइन भनेपछि श्रीमतीले गरिन् देहत्याग, म’र्नु अघि आमा र साथीहरूलाई यस्ताे भनेकि रहिछन् (भिडियो सहित)
दिदी भिनाजुको बिचमा सु’तेकी सालीको भयो यस्तो हाल